AMABALI AMA-9 ASIHLAYO SONKE – Contos de Sacanagem
← 9 CÂU CHUYỆN VỀ TẤT CẢ CHÚNG TA
AMABALI AMA-9 ASIHLAYO SONKE
Sibuze abafundi beBuzzFeed ukuba ngawaphi amabali abo abonisa iintloni. Apha ngezantsi, ezinye zeempendulo:
“Mna nomyeni wam sasabelana ngesondo eludongeni kwigumbi elimnyama xa ngesiquphe ndibetha iswitshi. Xa ukukhanya kukhanyise igumbi, ndamjonga emehlweni ndathi, ‘Makubekho ukukhanya!’ … Akufuneki ukuthi, khange sihambe yonke loo ndlela ngobo busuku. “
“Ndakhe ndayihlambalaza inkwenkwe endithandana nayo yaza yandichomela. Emva koko sayicoca yonke into (okanye sasicinga njalo). Ngaloo mva kwemini, ndaya kwindlu kamakhulu wam kwaye kuphela xa ndandihleli ecaleni kosapho lwam apho ndabona khona ukuba kukho inxenye yesidoda sakhe esichithekileyo ihempe yam emnyama. Ndingatsho nje ukuba ndifumana inkangeleko eninzi erhanelekayo. “
“Ndandihlala notatomkhulu notatomkhulu kwaye ndithandana nomfana. Ootatomkhulu baphuma baya kuthenga i-ayisikhrim, kwaye mna nesoka lam sathi siza kuba sekhaya” sibukele imovie “. : ‘Hlisani umoya, bafo!’ Utat’omkhulu wayemi emnyango ephethe ii-ice cream ezimbini. Sangena phantsi kweziciko, weza ngapha kwethu, wasinika ii-ice cream wemka. “
“Ngenye imini umhlobo wam wandifumana umfana owayemhle kakhulu, kodwa hayi isitayile sam. Sagqiba kwelokuba sibe nepikniki epakini kwaye iyure enye wasondela kum ukuze andanga. Ndemka. Kulapho aqalaza khona, Ndabona ukuba akukho mntu ndaza ndakhulula iblukhwe kwimizuzwana engaphantsi kwemibini, ndifumana ibhulukhwe yokuprinta ingwe kunye neebhutsi zayo. Andazi ukuba zazinjani izihlangu namhlanje. Ndathi hayi, ndifumene umnxeba kawonke-wonke osondeleyo. kwaye ndacela umzala wam ukuba eze azokundithatha.
“Ndandihambile nomhlobo wam osenyongweni, kwaye ekupheleni kobusuku, sagqiba kwelokuba siyokutya. Ngelixa ndandifumana isandwich, ndaqala ukuthetha nomfana. Ndamcela ukuba eze kwam kwaye saqala ukulala. ngenxa yokuxutywa notywala kunye nesandwich, ndiye ndaqala ukuziva kabuhlungu ndamlahla. Ngandlela thile saphela sithandana phantse iinyanga ezisibhozo. “
“Besihamba kumjikelo wesibini kwakusasa ngengomso, xa ejonga ezantsi kwaye abone igazi elininzi … Ixesha lam lafika ngequbuliso. Emva kokuhlamba nokulala ebhedini, umfana wam wathi,” ngokungathi ukrebe uhlasele uDick wam!
“Wayenomqhagi omkhulu, kuphela ikhondom yayincinci kakhulu. Ke kuye kwanyanzeleka ukuba ayeke phakathi embindini wesini kuba ikhondomu yayinqumla ukujikeleza kwegazi. Xa wayisusa ikhondom, idick yayihlaza okwesibhakabhaka. Uphantse wadlula kwaye Ewe, akukho nto siyenzileyo ngobo busuku. “
Eli lixesha lokuqala eliyintlekele:
“Ndilahlekelwe bubuntombi bam xa ndandineminyaka engama-21. Umfo lo wayendixelela ukuba unedick enkulu kunye nendlela endinethamsanqa ngayo (umbhuqi: ukuba uqhubeka ethetha loo nto, inokuba ayiyonyani). Ngexesha lokwabelana ngesondo, wema ukuze abeke Umbhalo ukuba ube nesandi esingasemva, kodwa waqhubeka esenza amagqabantshintshi malunga ne-documentary phakathi kwesini.Xa kugqityiwe, watsala ibhotile yevodka phantsi kwebhedi kunye nebhotile yeFanta.Wayinika uFanta waqala sela ivodka. Kude kube namhlanje, andikwazi ukusela iFanta ndingakhange ndikhumbule. “
Amava okuwisa imihlathi:
“Ngenye imini umntu wayelala ngesondo ngomlomo kum, kwaye xa wayephefumla phezulu, wayengakwazi ukuthetha!. Wayengasakwazi ukuhambisa umhlathi wakhe! Sachitha iiyure simasa ubuso bakhe ukuzama ukuvula, kodwa akukho nto yasebenza. Ke, Ngentsimbi yesi-6 kusasa, ndibize inqwelo yezigulana, bathi bakubuza ukuba kwenzeke ntoni, bathi ‘uzamisile evule umlomo kakhulu’ waze wakhulula imihlathi. kuloo ndawo.
Qaphela: iimpendulo zahlelwa ngokobungakanani kunye / okanye ukucaciswa.
Ndenza ukuba incwadi yam yokuwela ifumaneke kwintengiso kwiikhonkco:
Ndibala ukufikelela kwakho, ukuthenga kwakho kunye nokuxela.